Nsogbu Ndị Pụrụ Ime Mgbe Ọdịnaya Duplicating - Khachaturyan Nataliya, Ọkachamara nke Ọkachamara kọwara otú e si anagide nsogbu ahụ
Ụdị ọdịnaya bụ ụdị ọdịnaya nke na-egosi na netwọk ụwa na ọtụtụ ebe, ma ọ bụrụ na isiokwu ndị ahụ na-apụta na weebụsaịtị dị iche iche, a ga-ebelata ogo ogo saịtị gị, Google ga-enwetakwa ya. Ọ dị mma ikwupụta na ọdịnaya nwere ike imetụta ụda njị gị, ogo. Mgbe enwere ihe karịrị otu ọdịnaya na intaneti, Google na ihe ndị ọzọ search engines ga-amasị ya na nwere ike ikpebi ịkwanye saịtị ndị ahụ n'azụ mpi - despre fotografia digital.
Gịnị mere ejiji ma ọ bụ depụtaghachi ihe gbasara ọdịnaya?
Khachaturyan Nataliya, Semalt Content Strategist, na-akọwa na maka engines ọchụchọ, mbipụta ma ọ bụ depụta ọdịnaya na-enye nsogbu atọ isi:
Ha enweghị ike ịghọta nke mbipute nke ọdịnaya kwesịrị ịkwanye na onye a ga-amachibidoro.
Ha amaghị ihe ọ bụla gbasara ma ọ ga-edozi ọnụọgụ njikọ na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ debe ha na nsụgharị dị iche iche.
Ụlọ ọrụ ọchụchọ ahụ enweghị ike ịghọta ụdị mbipụta nke ọdịnaya kwesịrị ịhọrọ maka nsonazụ ọchụchọ ahụ.
Maka webmasters na ndị na-ede blọgụ, ọdịnaya abụọ nwere ike ịkpata ọtụtụ nsogbu
Ọ na - enye ahụmịhe ọrụ njirimara, a na - amanyekwa engines ịchọpụta iji chọpụta ọtụtụ weebụsaịtị n'otu oge ọbụna mgbe ị bụ onye edemede mbụ nke otu isiokwu.
Maka ịnye ahụmịhe ọchụchọ ka mma, Google ga-egosiputa nsụgharị dịgasị iche iche nke ọdịnaya ahụ ma mee ka ọhụụ nke mbido abụọ ahụ pụta.
Nwekọrịta ziri ezi nwere ike ịmegharị ka dịka weebụsaịtị ndị ọzọ ejiri depụta ọdịnaya gị iji wuo njikọ na weebụsaịtị ha. Nke a nwere ike ịhapụ njirimara na njirimara nke ọdịnaya gị n'ime nsonaazụ ọchụchọ engine .
Olee otu m ga - esi edozie ọdịnaya abụọ?
Idozi mbipụta ma ọ bụ depụtaghachi ọdịnaya nwere ike ime mgbe ị na-edozi nsogbu niile dị na ọdịnaya gị ma na-enyocha ya site na Copyscape tupu ị na-ebipụta ya na ịntanetị. Mgbe ọ bụla ịchọtare ọdịnaya nke weebụsaịtị dị iche iche, ị ga-ekwusara Google ma ọ bụ kọntaktị onye nchịkwa ahụ na saịtị ahụ iji wepu ọdịnaya ahụ tupu ya agafee ma Google kpebiri ịhazi saịtị gị.
Usoro ụzọ redio 301
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwere ike ịlụ ọgụ ọdịnaya abụọ site na ịmepụta 301 redirects site na peeji nke abụọ na ọdịnaya mbụ gị. Mgbe e jikọtara ibe dị iche iche na URL ahụ, ha ga-akwụsị ịkwụsị ịlụ ọgụ na-akpaghị aka ma ghara ịmepụta mkpa maka ọdịnihu.
Ụdị ndabere = "canonical"
A na - akpọ aha ọzọ usoro okporo ụzọ = ụzọ. Ọ na-eme ka Google, Bing na Yahoo mara na a ga-emeso ibe weebụ gị dịka ezigbo ya, a ga-emeso ibe ndị yiri ya dị ka oyiri. Ka anyị kwuo ebe a na àgwà njirimara na-abụ akụkụ nke koodu HTML nke ibe weebụ gị.
Ụzọ ndị ọzọ iji dozie ọdịnaya abụọ
Ịkwesịrị ịnọgide na-anọgidesi ike mgbe ị na-etolite njikọ dị n'ime saịtị gị. Mgbe ị na-ejikọta ọdịnaya, ị kwesịrị ijide n'aka na saịtị ahụ na-arụ ọrụ na-agbakwunye njikọ gị na ọdịnaya mbụ gị ma ọ dịghị mgbanwe na URL ya. Iji mezuo nchebe nke saịtị gị ma chekwaa ọdịnaya gị site na ị depụta ya na ịntanetị, ịnwere ike ịgbakwunye ndabere onwe gị - njikọta njikọ gị na ibe weebụ gị.